Ukuthetha nabantu be-Tuent - Geofumadas
NgoSeptemba, 2010 Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, ezintsha
Le veki yashicilelwe kwiiNkcazo zeMagazini udliwano-ndlebe olunomdla u-Ernesto Ballesteros wenkampani iTuent, elandelayo kwimibandela ye-6 kuphela ezisa isiqulatho esibalulekileyo kwi-geospatial community.
I-tente yinkonzo entsha, phakathi kwezinye izinto, inika ithuba lokubeka iipaneli zokulawula indawo. Akuthathi ixesha elide ukuba imephu ibekwe kwi-intanethi, idibaniswe nedata yeenkcukacha kwaye ixhunywe kwiithebula ze-Excel. Kuba ngoku isevisi ikhona kwi-United States, eMexico naseSpeyin, kodwa ngenxa yezinto ezintsha, iinzame kunye nesantya apho badibanise khona imephu evela kwamanye amazwe, ndiqinisekile ukuba baya kukhula ngakumbi; Banoba novulo lwabalingane abafisa ukulumela kwamanye amazwe.
Kwiinkampani, oorhulumente bendawo okanye imibutho yezopolitiko yinto engafanelekiyo, ngenxa yokuba unemizamo encinane ungayisebenzisa ngokunokwenzeka ukuguqulwa kwezinto, kunye nezinto zonke efini. Kukho inguqulelo yamahhala ebizwa ngokuba yi-Free ezamahala; kulabo abalindele ngakumbi, i-premium ye-premium, enokuthi inkonzo yabo inokukwazi ukudibanisa kuphela iimephu ezibonakalayo kwiinguqulelo kunye nekhono lokwenza ngokwezifiso abasebenzisi, ukufikelela okanye imihlaba yenye yehlabathi.
Ngokuqinisekileyo ngexesha baya kuba nokudala iinkonzo ezitsha ezizimeleyo ezibhekiselele kumacandelo athile, njengokuba umzekelo we-pharmacy medium apho inkonzo yeGeofarma ihamba kakuhle.
Ndiyishiya impendulo yokuqala, njengomzekelo omele ufunde ngokugcwele.
1. Ubani na owelayo? Ngaba uvela kwi-market market okanye kwi-market ye-Geotechnological market?
Siyinkampani encinci enomkhulu waseSpain, eyakhiwe liqela labantu elinoxanduva oluqhelekileyo lokuba sihlale sizinikezela kwihlabathi le-geotechnical, nangona kwimiba eyahlukileyo. Abanye, njengokuba kunjalo, saqala ekuveleni idatha yedatha yezolawulo ezahlukeneyo zoLuntu (iCadastre, i-Autonomous Communities, njl.), Kwaye kamva sazinikela ekuhlalutweni kwe-GIS. Isebe lophuhliso lenziwe ngabaprogram abaza kakhulu kwilizwe le-GIS. UMlawuli wethu Jikelele, weNjineli yeeTelenimenti, naye wayephethe izikhundla eziphezulu kwiinkampani kwicandelo lakhe elidlulileyo, ngokugqithiseleyo ekuphunyezweni kwezisombululo ze-geospatial.
Le mibuzo yile mibuzo ibuzwe, ukuba ngaphandle kokungabaza ukubona intambo epheleleyo, wongezwa kwintlanganiso edliwano-ndlebe yangaphambili Geomarketingspain Unokuba nekamva elikhuthazayo leenkqubo eziphumelelayo kwintsimi ye-geospatial.
2 Uninzi lwabafundi bethu ngabaphuhlisi okanye abahlalutyi kwicandelo le-Geospatial kwaye phantse bahlala benomdla "kwii-guts" zezi mveliso. Ngaba uceba ukufudukela kwizisombululo zentlawulo? Kunzima kangakanani ukudibanisa izinto kunye neenkonzo zedatha ezihlanganisiweyo?
3. Uphuhliso lwezobuchwepheshe olusekelwe kwiGeomarketing lunokunceda uninzi lwemifanekiso yezoshishino. Unjani uhlobo lomthengi ofuna ukufikelela kuyo? Ngaba abathengi bakho bafuna ulwazi oluthile lobuchwepheshe ukuze basebenzise iinkonzo zakho?
4. Kwabo bantu abanokuba ngabaxhamli abangayazi wena Ziziphi iinkonzo ezenzileyo? Ngaba unokusiqhubela phambili uhlobo oluthile lwamanani?
5. Wena sele abangaxhalabisiyo ukuzithengisa Geotechnologies ethanda abaxhasi bakho abayaziyo okanye wena ngaphambili kuye kwafuneka ukuba enze iinzame ukuze bazise amathuba kubo?
6. Njengoko sele usukhankanyile, usebenze lolu hlobo lweenkonzo ukusuka kwi-2006. Ubona njani ukuba olu hlobo lweenkonzo ze-GEO luya kuvela kwixesha elizayo? Ngaba uceba ukucebisa izixazululo zeselula ezisusela kwi-geomarketing?
Ezinye iindaba ziyabonakala kwiBhulogi ye-Tuentfree kunye neqela lakhe le-Facebook.
Post edlulileyo«Edlulileyo Oko esiza kubona kwi-Inspired 2010
Post Next I-Microstation Geographics, qhagamshela kwiDatabaseOkulandelayo "